မိုးညချမ်း: “Behind the Scene”
“Behind the Scene”
“နောင်တ” တရားဆိုတာ အချိန်လွန်မှ ရတတ်သတဲ့လား? ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြေဆည်ရမယ်မှန်း မသိ။ မျက်ရည်ကျဖို့ပင် အားမရှိတော့လောက်အောင် မေမေ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကို တွေတွေကြီး ကြည့်နေမိသည်။ ဘေးက ဆွေမျိုးတွေက “ငိုချလိုက်လေ သမီး … စိတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါကွယ်”လို့ နှစ်သိမ့်နေကြပေမယ့် မျက်ရည်ကမကျ ရင်ထဲတစ်ဆို့ကြီးဖြစ်နေသည်။
ကျွန်မ မေမေ့ကိုမခွဲနိုင်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မလွဲမသေခွဲခွာကြရမှာဆိုပေမယ့် မေမေ ခုလို ရုတ်တရက်ခွဲခွာသွားမယ်လို့လည်း မတွေးမိခဲ့ပါ။
“သမီးရေ … မေမေ့ကို နောက်ဆုံးကန်တော့လိုက်နော် … မီးသဂြိ င်္ုလ်စက်ထဲထည့်တော့မယ်”လို့ ဖေဖေ့သတိပေးသံကြားတော့ မေမေ့မျက်နှာကိုနောက်ဆုံးတ၀ကြီးကြည့်ရင်း ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာမိတော့သည်။ “မေမေရယ် … နောင်ဘ၀ဆိုတာသာရှိခဲ့ရင်လေ မေမေ့အပေါ်မှာ ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ခဲ့သမျှ သမီးပြန်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ မေမေနဲ့ပြန်ဆုံဆည်းပါရစေ”လို့ တိုးတိုးလေးဆုတောင်းမိလိုက်သည်။ ထိုဆုတောင်းသည် မှားလား/မှန်လား မသိပါ။ ဒါပေမယ့် မေမေနဲ့တော့ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ဆုံဆည်းချင်မိပါသည်။
မီးသဂြိ င်္ုလ်စက်ထဲ မေမေ့ရုပ်ကလပ်ကို သယ်သွားတာကို ငေးကြည့်ရင်း ရုတ်တရက်အပြင်ကို ပြေးထွက်ကာ မီးခိုးခေါင်းတိုင်က ထွက်လာသည့် မီးခိုးငွေ့များကိုကြည့်ရင်း …..
ကျွန်မသည် တစ်ဦးတည်းသောသမီး … ဖေဖေမေမေတို့ရဲ့ အချစ်ကိုတစ်ဦးထဲ ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ရတာ အလွန်ကံကောင်း သည်ဟု ယူဆပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ မောင်နှမသားချင်းလိုချင်မိပြန်သည်။ ဖေဖေနဲ့ မေမေက အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကျွန်မ တစ်ဦးထဲကိုသာ မွေးထားသည်မို့ အလွန်တုန်နေအောင် ချစ်ကြသည်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေမို့ စားဝတ်နေရေးကို ချင့်ချိန်သုံးစွဲရပေမယ့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွန်မလိုချင်တာ မှန်သမျှ မညည်းမငြူ တတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတာလည်း ဖေဖေနဲ့ မေမေပင်။ ကျွန်မ ဘွဲ့ရသည့်နေ့က ဖေဖေနဲ့ မေမေရဲ့ မျက်နှာမှာ အထင်းသာပေါ်နေတဲ့ ပီတိအပြုံးကို ကျွန်မမေ့ရမည်မထင်။ ကျွန်မကျောင်းပြီးသည့်နှစ်မှာ ဖေဖေကသက်ပြည့်ပင်စင်ယူပြီး မေမေက ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့် ဆေးပင်စင်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့ကြသည်။
ဖေဖေနဲ့ မေမေပင်စင်ယူပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်မက အလုပ်ထဲစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့လေပြီ။ (၁၀)တန်းအောင်သည့်အချိန်တုန်းကရော တက္ကသိုလ်တက်နေသည့်အချိန်ကပါ အချိန်ရလျှင်ရသလို English Speaking ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းစသဖြင့် သင်တန်းတွေစုံအောင် လျှောက်တက်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတက်ချင်သမျှ သင်တန်းတွေကိုလည်း ဖေဖေနဲ့ မေမေက ရသည့်လစာလေးဖြင့် ခြစ်ကုတ်ထားပေးခဲ့သည်။ အဲဒီသင်တန်းတွေက ရလာတဲ့ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်တွေကြောင့်ပဲ လစာမနည်းလှသော အလုပ်တစ်နေရာစာရခဲ့လေသည်။ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့ရဲ့ ပင်စင်လစာလေးအပါအ၀င် ကျွန်မရဲ့လစာလေးနဲ့ မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလှသည်မဟုတ်ပေမယ့် လူတန်းစေ့တော့ နေနိုင်ခဲ့သည်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မလုပ်ငန်းခွင်ရောက်တော့ ခင်မင်လာရတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ လက်တွဲခေါ်မှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ ပရဟိတအသင်းလေးမှာ အသင်းဝင်ကာ ပရဟိတအလုပ်လေးတွေ စလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းများ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ စိတ်ဝေဒနာသည်များဆေးရုံ၊ အနာကြီးရောဂါသည်များရှိရာ ဂေဟာစသဖြင့် သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်းတွေ၊ လုပ်အားပေးခြင်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်တောင် အိမ်မကပ်နိုင်အောင် လုပ်အားပေးခဲ့သည်။ ဖေဖေနဲ့ မေမေကလည်း မွန်မြတ်လှသည့် ပရဟိတအလုပ်အတွက် ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိ လိုအပ်တဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသလို အားလည်းပေးခဲ့ကြသည်။ ပရဟိတခရီးတွေသွားပြီးပြန်လာတိုင်း ရရှိလာတဲ့ပီတိတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖေဖေနဲ့မေမေ့ကို ပြန်ပြောပြရတာလည်း အမောပေါ့။
“သမီးလေး … ဒီနေ့ရုံးခွင့်ယူလို့ရင်ယူပါလားကွယ် … မေမေနေသိပ်မကောင်းလို့ ဆေးခန်းသွားချင်တာ … ဆီးချိုပဲ တက်နေသလား? သွေးပဲတိုးနေသလားမသိပါဘူး … သမီးဖေဖေကလည်း မျက်စိသိပ်မကောင်းတို့ မေမေတို့ ၂ ယောက်ထဲသွားလို့မဖြစ်လို့”
“ခွင့်ယူလို့မရလောက်ဘူး မေမေရ … ဒီနေ့ရုံးမှာ အရေးကြီးအစည်းအဝေးရှိတယ် …”
မေမေဘာမှတော့ ဆက်မတောင်းဆိုတော့ပေမယ့် မေမေ့မျက်နှာညှိုးသွားတာကိုတော့ သတိထားမိလိုက်သည်။ စိတ်ထဲမကောင်းပေမယ့် အရေးကြီးအစည်းအဝေးရှိသည့်ရက်တွင် ရုံးခွင့်ယူလျှင် အထက်လူကြီးငြိုငြင်သွားမှာ စိုးရိမ်မိသည်။ မေမေ့ကိုပြောပြီး ရုံးသွားရန် ပြင်ဆင်ကာ ရုံးဖယ်ရီကိုစောင့်ရန် လမ်းထိပ်သို့ထွက်လာလိုက်သည်။ လမ်းထိပ်ကို လမ်းလျှောက်လာရင်း အိတ်ထဲက ဖုန်းသံမြည်လာသည်။
“Hello … ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါရှင် …”
“ဖြူနှင်းရေ … အိလေးပါ … ခုလာပေးလို့ရလားဟင်? ဒီမှာ အဘိုးတစ်ယောက်မူးလဲနေလို့ဟ … ဆေးရုံဖြစ်ဖြစ် ဆေးခန်းဖြစ်ဖြစ်ပို့မှဖြစ်မယ် … အခြေအနေသိပ်မကောင်းလောက်ဘူး … ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖုန်းဆက်မရလို့ နင့်ဆီဆက်လိုက်တာ … ငါတစ်ယောက်ထဲ အဆင်မပြေဘူးဟ … လာခဲ့ပေးနော်”
“အေး အေး သူငယ်ချင်း … ငါခုထွက်လာပြီ”
အိလေးနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတာနဲ့ Taxi ငှားကာ သူမရှိရာနေရာသို့ ထွက်လာလိုက်သည်။ ထိုနေရာသို့ သွားရင်း ကားပေါ်မှာ “ငါ ရုံးကို ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ”လို့တွေးရင်း ဆရာ့ဆီသို့ ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။
“Hello … ဆရာ သမီးဖြူနှင်းပါ … ဒီနေ့ မေမေတော်တော်လေး နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ … အဲဒါဆေးခန်းသွားပြမလို့ သမီးကို ခွင့်တစ်ရက်ပေးပါနော်”
“ကောင်းပြီ ဖြူနှင်း … မနက်ဖြန် ရုံးရောက်တာနဲ့ ခွင့်စာတန်းတင်ပါ”
ဟူး … တော်သေးတာပေါ့ …။ ဒီနေ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မဆူပါလားလို့ တွေးရင်း အိလေးရှိတဲ့နေရာကို ရောက်လာသည်။ အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ လဲကျနေသည့် အဖိုးကို ပတ်ဝန်းကျင်အကူအညီနဲ့ နီးစပ်ရာဆေးခန်းကို ပို့ပေးလိုက်သည်။ ဆရာဝန်က “ဘာတော်လဲ”လို့ မေးတော့ “ဘာမှမတော်ပါဘူး ဒေါက်တာ … ကျွန်မတို့က ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပါ … လမ်းမှာ ဒီအဖိုး မူးလဲနေတာတွေ့လို့ ကူညီပြီး ဆေးခန်းလာပို့ပေးတာပါ”။ ဆရာဝန်လည်း အဖိုးကိုစမ်းသပ်ရင်း “သိပ်တော်တဲ့ ကလေးမတွေပဲ”လို့ ဆရာဝန်ရဲ့ချီးကျူးစကားကြားတော့ ရင်ထဲပီတိဖြစ်ရခဲ့ပြန်သည်။
“လူနာက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး … ဖျားလို့ အားနည်းပြီး မူးလဲသွားတာပါ … သူခဏနေ သတိရလာမှာပါ … လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေပေးလိုက်ပါတယ် … ဂရုတစိုက်တိုက်ပေးလိုက်ပါ”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ ဒေါက်တာ”
အဖိုး သတိရလာတာနဲ့ ဆရာဝန်ကို ကျသင့်သည့်ဆေးဖိုးဝါးခအား အိလေးနဲ့ ကျွန်မ တစ်ယောက်တစ်ဝက်စီ ရှင်းကာ အဖိုးကို သူနေသည့် လိပ်စာကိုမေး … အဖိုးအတွက် စားစရာတွေဝယ်ကာ သူ့အိမ်လေးဆီ ပြန်လိုက်ပို့ခဲ့ကြသည်။ အဖိုးကိုပြန်ပို့ပြီး အိလေးနဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မုန့်စားရင်း အသင်းနှစ်ပတ်လည်ကျ ဘာတွေလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောရင်း “ဟဲ့ … ဖြူနှင်း ဒီနှစ်အသင်းနှစ်ပတ်လည်ကျရင် နင် ဆုတစ်ဆုရလောက်တယ် … ဒီလောက်တောင် ပရဟိတအလုပ်တွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး ငါတို့ထက် ပိုလုပ်နေတာ”လို့ ချီးမွမ်းရင်းပြောလာတော့ ရင်ထဲဝမ်းသာမိရပြန်သည်။ အိလေးနဲ့ စကားကလည်း ပြောကောင်းပေမယ့် မုန့်စားပြီးတာနဲ့ အိမ်ပြန်လာလိုက်သည်။
အိမ်ရောက်တော့ ရုံးဆင်းချိန်ထက် စောပြန်လာတဲ့ ကျွန်မကို မေမေက -
“အယ် … သမီးလေး ပြန်လာတာ စောလှချည်လား … ရုံးမှာပင်ပန်းလာလို့လား? … နေမကောင်းလို့လား?”
“ဟုတ် မေမေ … သမီး ခေါင်းနည်းနည်းမူးနေလို့ … အဲ့ဒါကြောင့် ခွင့်တောင်းပြီး ရုံးစောစောဆင်းလာတာ”
“မှန်းစမ်း … ဖျားသလား … အားနည်းနေတာများလား … ဆေးခန်းသွားမယ်လေ သမီး”
“နေပါစေ မေမေရယ် … သမီးတစ်ရေးအိပ်လိုက်ရင် သက်သာသွားမှာပါ …”လို့ ပြောရင်း မေမေ့ရှေ့မှာ ကြာကြာမနေရဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလုံသလိုခံစားနေရလို့ အခန်းထဲအမြန်ဝင်ခဲ့လိုက်သည်။ ညနေစောင်းတော့ ကျွန်မအတွက် ကြာဇံပြုတ်နဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ယူလာကာ “ဒါလေး ကုန်အောင်စား … ကော်ဖီလေးနဲ့ ဆေးသောက်လိုက်နော် သမီးလေး”လို့ ပြောကာ တစ်ညလုံး ကျွန်မအခန်းထဲသို့ ဝင်လာလိုက် နဖူးလာစမ်းလိုက် … ကျွန်မမျက်နှာကိုကြည့်လိုက် ပြန်ထွက်သွားလိုက်နဲ့ မေမေ အလုပ်တွေပိုသွားခဲ့သည်။ ညဉ့်အတော်နက်လာတော့ ကျွန်မလည်း အိပ်ပျော်သွားကာ မေမေထပ်ဝင်လာ/မလာကိုတောင် မသိတော့။
မနက်လင်းတော့ မျက်နှာသစ်ကာ မနက်စာစားဖို့ထွက်လာတော့ မီးဖိုချောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ ဖေဖေက -
“ဟော သမီးတောင် နိုးပြီလား? ဖေဖေထမင်းကြော်ထားတယ် … စားလိုက်အုံး … ပြီးမှ ရုံးသွားနော် … ခေါင်းမူးနေတာရော သက်ရောသက်သာရဲ့လား”
“ဟုတ် သက်သာပါတယ် ဖေဖေ … ဒါနဲ့ မေမေရောဟင်?”
“သမီး မေမေ နေမကောင်းလို့ အိပ်နေတယ် …”
“သြော် ဟုတ် ဟုတ် ဖေဖေ သမီးပြီးမှ မေမေ့ဆီသွားလိုက်မယ်”လို့ပြောပြီး ဖေဖေအဆင်သင့်ပြင်ပေးထားသော ထမင်းစားပွဲဝိုင်းမှာ စားရင်း “မနေ့က မေမေဆေးခန်းသွားပြဖို့ ခွင့်ယူခိုင်းတုန်းက မယူဘဲ တစ်ခြားကိစ္စနဲ့ ခွင့်ယူတာများ သိသွားလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာများလား”လို့ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ စိတ်ပူနေမိသည်။ မနက်စာစားနေတုန်း ကျွန်မဖုန်းလေးမြည်လာလို့ ကိုင်လိုက်တော့ -
“ဖြူနှင်းရေ … ခုချက်ချင်းရုံးကိုလာခဲ့ပေးပါ … ဆရာက ဒီနေ့လူကြီးလမ်းကြောင်းလိုက်ရမှာ … လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာမ်းတွေက ညည်းဆီမှာဆိုတော့ ခုချက်ချင်းလာပေးမှရမယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ … ခုချက်ချင်းထွက်လာပါ့မယ်”လို့ ပြောပြီး ရေအမြန်ချိုး ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ကာ မေမေ့ကိုတောင် နှုတ်မဆက်နိုင် ဧည့်ခန်းမှာ သတင်းစာထိုင်ဖတ်နေတဲ့ ဖေဖေ့ကို “ဖေဖေရေ ရုံးက အရေးတကြီးဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ သွားတော့မယ် … မေမေ့ကိုပြောပေးပါနော်”လို့ လှမ်းအော်ပြောရင်း ရုံးကိုအလျင်အမြန်ထွက်လာလိုက်သည်။
ရုံးရောက်တော့ ဆရာ့အတွက် လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပြင်ဆင်ပေးပြီး ဆရာထွက်သွားတော့မှ သက်ပြင်းချကာ ရုံးအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်နေလိုက်သည်။ တစ်နေ့တာ အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိ။ မနေ့က ရုံးတစ်ရက်လောက်ပျက်လိုက်တာ အလုပ်တွေ တောင်လိုပုံနေသည်။ နေ့လည်စာတောင် အချိန်ပေးမစားနိုင်။ Ready made ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးအမြန်စား … အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်နေရင်းနဲ့ ရုံးဆင်ကာနီး တစ်နာရီအလိုလောက်မှာတော့ ဖုန်းဝင်လာသည်။ ကိုင်လိုက်တော့ ဖေဖေ့ဆီက ဖြစ်နေသည်။ “ဟယ်လို”ဆိုသည့် ဖေဖေ့အသံက တုန်ရီနေသည်ကိုတော့ သတိထားမိလိုက်သည်။
“သမီးလေးရေ … စိတ်ကို ခိုင်ခိုင်သာထားနော် … သမီး မေမေ သွေးတအားတိုးလို့ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး နေ့လည်ကပဲ ဆုံးသွားပြီ”
ကျွန်မ ဖေဖေ့ကိုတောင် စကားဆက်ပြောရန် အင်အားမရှိတော့ပါ။ အချိန်တွေကပဲ မြန်လွန်းတာလား? ဘာတွေကပဲ လွဲနေခဲ့တာလဲ?။ မနေ့ကပဲ မေမေနဲ့ ကျွန်မစကားတွေပြောခဲ့ကြသေးသည်။ သူမကိုယ်တိုင် နေမကောင်းတာတောင် အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး အသက် (၇၀)နားနီးနေတဲ့ မေမေ့ကို ဂရုမစိုက်နိုင် အခြားသူအတွက် ဦးစားပေးမိသလိုဖြစ်သွားတဲ့ ဟန်ဆောင်ကောင်းသောသမီးတစ်ယောက်ကို ဂရုဏာတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ နောက်ဆုံးချိန်ထိ ပြုစုပေးခဲ့တဲ့ မေမေ …။ ကျွန်မ မေမေ့ကို နှုတ်မဆက်ရသေး။ မေမေ့ကို မတောင်းပန်ရသေး။ အသက်ကြီးလာလို့မျက်စိမှုန်တော့ တစ်ယောက်ထဲသွားလာရတာအဆင်မပြေ ... တစ်ခါတစ်လေပင်စင်ထုတ်ဖို့ အဖော်မရှိတဲ့အခါ မေမေခေါ်တိုင်း အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနှင့်ငြင်းခဲ့ဖူးသည်။ နေမကောင်းလို့ ဆေးခန်းသွားချင်တိုင်း အကြောင်းပြချက်တွေနှင့် ငြင်းခဲ့ဖူးသည်။ ပရဟိတအတွက်ဆို လက်မနှေးရှေ့ဆုံးက ပြေးခဲ့ဖူးသည့် အများလေးစားအားကျရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် နောက်ကွက်က သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘတွေအပေါ် လျစ်လျူရှုမှုတွေကို အခြားသူတွေက မမြင်။ အထီးကျန်ဆန်ဆန်နေရသည့် မိဘတွေအတွက် အချိန်မပေး ပရဟိတအတွက် မနက်လင်းကနေညမိုးချုပ်ထိ နားရကောင်းမှန်းမသိ အများကချစ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် နောက်ကွက်က ညညဆိုအိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးကို မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးမှာ ထိုင်စောင့်နေကြတဲ့ သနားစဖွယ်သက်ကြီးမိဘတွေကို လူတွေမမြင်ခဲ့ပေမယ့် သေမင်းကတော့ မြင်သွားခဲ့လေပြီ။
26.11.2016 (9:00 p.m)
Posted by မိုးညချမ်း at 11:08 PM
coralnyo@gmail.com August 25, 2018 at 9:38 AM
ဘလော့လေးကို ဖုန်လာခါတာပဲကျေးဇူးတင်လှပါပြီ... အချိန်အားရင်အသစ်တွေတင်ပါ တင်စရာမရှိလဲ ကလေးလေးတွေပုံတင်ပေးပါ...။
စံပယ်ချို August 27, 2018 at 6:35 AM
ဇူလိုင်လရဲ့ မိုးစက်တွေကြားမှာ မွေးဖွားလာရလို့ “မိုးညချမ်း”ရယ်လို့ အမည်နာမတစ်ခုသတ်မှတ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်၊ ကြုံတွေ့ စိတ်ကူးမိတာလေးတွေအပါအ၀င် ကိုယ်တိုင်ခံစားကြုံတွေ့လို့ ရင်ထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို ကဗျာ၊ ၀တ္ထု၊ စာစုများအဖြစ် ဖန်တီးပြီး ချရေးလိုက်မိပါတယ်ရှင် ...
Facebook Profile လေးက...
Moe Nya Chan
Facebook Like Page လေးပါ ...
Save The Aged (1)
လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ blogger များ(၁)
​ဇောငျး​ @ Thinking on the Blog
အ နှိုင်း မဲ့
စွဲလန်းသူ . . . လွမ်းစေသား
ကမ္ဘာကြီးဆိုတဲ့ မပီမသကိစ္စကို လူသားအမြင်သက်သက်အရ မပီမသ
Follower လေးလည်းလုပ်သွားအုံးနော် ...
လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ blogger များ(၂)
ကင်းဝန်မင်းကြီး၏ အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းများ
Hola soy naytar como les vaatodos jeje es netisima